यसकारण धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा छ सिभिल इन्जिनियरिङ
प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-९
दिनेश गौतम काठमाडौं, २४ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने रु के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने रु नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ’प्लस टु पछिको गन्तव्य’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ (Civil Engineering)बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो सिभिल इन्जिनियरिङ ?
मानिसका लागि जमिनमाथि वा जमिनमुनि जति पनि पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् । ती पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा सिभिल इन्जिनियरिङ हो । एउटा आर्किटेकले कल्पना गरेर नक्सा बनाउँछन् ।
सिभिल इन्जिनियरले त्यो कल्पनालाई वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्न योग्य बनाउँछन् । सिभिल इन्जिनियरले पुल, सडक, घर, हाइड्रो पावरलगायतका भौतिक संचना निर्माणको काम गर्छन् । ती संरचनाको सर्भे गर्ने, भौतिक संरचनालाई कस्तो आकारमा ढाल्ने, खर्चको हिसाबकिताब गर्ने, लागत अनुमान निकाल्ने, सामग्रीको प्रयोगलगायतकका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने शिक्षा सिभिल इन्जिनियरिङ हो ।
सिभिल इन्जिनियरिङ स्नातक तहको चार वर्से कोर्स हो । जसमा आठ वटा सेमेस्टर हुन्छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण भएपछि मास्टर्स लेभलको कोर्स पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्स सञ्चालन गरेका छन् । सबै विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरुलाई ४८ जनाको कोटा दिएको छ । तर, केही कलेजहरुको भौतिक संरचना र क्षमताको आधारमा कोटा बढि दिएको छ ।
प्लस टुमा विज्ञान विषय पढेकाले
सबै विषयमा ‘सी’ ल्याएकोले
सीटीईभीटीबाट डिप्लोमा गरेकाले
ए लेभलमा विज्ञान विषय पढेकाले
विश्वविद्यालयले लिने इन्ट्रान्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले
सिभिल इन्जिनियरिङ मट्रियल्स
स्नातक तहको सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न १०–१२ लाख खर्च लाग्छ । तर, क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाको आधारमा शुल्क केही फरक हुन सक्छ ।
सिभिल इन्जिनियरिङ नै पढ्ने रहर भएका तर १०–१२ लाख खर्च गर्न नसक्ने केही विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयले लिने इन्ट्रान्स परीक्षामा धेरै अंक ल्याउने र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति दिइन्छ ।
कुन क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ ?
सरकारी सेवामा लाग्ने हो भने सरकारले तलब तोकेको हुन्छ । स्नातक तहको कोर्स भएकाले अधिकृत स्तरको तलब हुन्छ । सुरुवातमा कम्तीमा २०–५० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बीएचसीएम : सेवा पनि करियर पनि
आफ्नो क्षमता र दक्षताको आधारमा १ लाख माथि कमाउन पनि सकिन्छ । आफैं कम्पनी खोल्ने हो भने लगानीअनुसारको आम्दानी गर्न सकिन्छ । नक्सा बनाउने, डिजाइन गर्ने, परामर्श दिने र ठेक्का लिएर काम गर्ने हो भने पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
कहाँ कहाँ पढ्न पाइन्छ ?
कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज, धापाखेल, ललितपुर
एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, कुपण्डोल, ललितपुर
ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज, चाकुपाट, ललितपुर
क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज, बालकुमारी, ललितपुर
काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, कालिमाटी, काठमाडौं
हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ, च्यासल ललितपुर
सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज, सानेपा, ललितपुर
थपाथली क्याम्पस, थापाथली, काठमाडौं
पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक, ललितपुर
नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ, सातदोबाटो, ललितपुर
कान्तिपुर सिटी कलेज, पुतलीसडक, काठमाडौं
एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीतापाइला, काठमाडौं
कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेज, बुद्धनगर, काठमाडौं
हिमालयन इस्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नयाँ बानेश्वर, काठामाडौं
हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, बालकुमारी, ललितपुर
एसियन इस्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट, खुमलटार, ललितपुर
मोर्गन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, बसुन्धरा, काठमाडौं
एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज, सानेपा, ललितपुर
कोसमोस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी, सातदोबाटो, ललितपुर
युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, चाकुपाट, ललितपुर
नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, बालकुमारी, ललितपुर
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुर
पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज, पोखरा, कास्की
काठमाडौं विश्वविद्यालयले अन्य कलेजलाई यो कोर्सको सम्बन्धन दिएको छैन । यसले काभ्रेको धुलिखेलमा सिभिल इन्जिनियर कोर्स सञ्चालन गरेको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि अन्य कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छैन । यसले सुर्खेतमा सिभिल इन्जिनियर कोर्स सञ्चालन गरेको छ ।
सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनपछि धेरैको रोजाइमा विदेश पर्छ । सिभिल इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थी काम र मास्टर्स लेभलको अध्ययनका आफ्नै खर्चमा विदेश जान्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बीसीएः किन पढ्ने ? कहाँ पढ्ने
नेपाली विद्यार्थी जुनसुकै देशमा पुगेका छन् । यद्यपि, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडालगायतका देश विद्यार्थीको रोजाइमा छ ।
शिक्षक-विद्यार्थीकाे नजरमा सिभिल इन्जिनियरिङ
पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञको उत्पादन
डा. दीपकविक्रम थापा क्षेत्री, कार्यक्रम प्रमुख, कान्तिपुर सिटी कलेज
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम धेरै बाँकी छ । पूर्वाधारमा अन्य देश धेरै अगाडि बढेका छन् । तर, हाम्रो देश अझै पनि विविध कारणले पछि छ । अबको युग विकासको युग हो । मानिसको चाहनाअनुसारको पूर्वाधार निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : वन विज्ञान : नर्सरीदेखि पर्यटनसम्म अवसर
गुणस्तरीय सडक, पुल, हाइड्रोपावर, घरलगायतका भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेछ । ती क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञको खाँचो छ । विज्ञ उत्पादन गर्ने भनेको सिभिल इन्जिनियरिङ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
अर्जुन पौडेल, विभागीय प्रमुख, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज
पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका लागि डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न गर्ने काम इन्जिनियरको हो । राजनीतिक अस्थिरता सकिएसँगै नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुहोस्ः लिबरल आर्ट्सः विकास बुझेपछि जागिर पक्का
नेपालमा पुल, सडक, हाइड्रोपावरलगायतका प्रोजेक्ट अगाडि बढेका छन् । ती क्षेत्रमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले सिभिल इन्जिनियरको महत्त्व छ । सिभिल इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थी अहिलेसम्म कोही पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छैन । बजारमा सिभिल इन्जिनियरको माग दिन प्रतिदिन बढेको छ ।
अरुणप्रसाद पराजुली, विभागीय प्रमुख (सिभिल), सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज
समाजमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधारहरूमा मात्र सिभिल इन्जिनियरिङको योगदान देखिए पनि यसको नदेखिने काम धेरै छन् । जस्तैः खानेपानी, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वायु प्रदूषण रोकथाम, पहिरो र बाढी नियन्त्रण, भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि, प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्धार कार्य व्यवस्थापन, सवारी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा पनि सिभिल इन्जिनियरको ठूलो भूमिका हुन्छ त्यसैले नेपाली समाजमा सिभिल इन्जिनियरको महत्त्व र आवश्यकता धेरै छ ।
नेपालमै कमाउन सकिन्छ
उज्ज्वल सापकोटा, इन्जिनियर
सिभिल इन्जिनियर पढेपछि बेरोजगार बस्नुपर्दैन । इमानदार र लगनशील भएर काम गर्ने हो भने विदेशमा कमाउने पैसा यहीँ कमाउन सकिन्छ । यहाँ पूर्वाधार निर्माणको काम धेरै छन् ।
घर निर्माणदेखि ठूला ठूला आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि धेरै भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेछ त्यसैले ती क्षेत्रमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकोले सिभिल इन्जिनियरको माग बढ्दो छ ।
नागरिकलाई खुसी दिलाउने पेसा
पुकार रेग्मी, विद्यार्थी
सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । बेरोजगार बस्नुनपर्ने र प्रतिष्ठित पेसा भएकाले सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो ।
अहिलेसम्म उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी कोही पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छैन । बजारमा इन्जिनियरको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले पनि पढ्नेको संख्या बढेको हो त्यसैले विद्यार्थीको रोजाइमा सिभिल इन्जिनियरिङ परेको छ ।
याे पनि पढ्नुहोस् ःबी फार्म : हस्पिटलदेखि कम्युनिटी फार्मेसीसम्म अवसर
कान्तिपुर सिटी कलेजको अन्तिम सेमेस्टरमा अध्ययनरत पुकार रेग्मीको सपना सानैदेखि इन्जिनियर बन्ने थियो त्यसैले उनले सिभिल इन्जिनियरिङ रोजे । ‘राम्रो काम गरेर नागरिकलाई खुसी दिलाउने पेसा हो,’ उनी भन्छन्, ‘नाम र दाम दुवै हुन्छ ।’
नेपाल विकासोन्मुख देश हो । पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासका धेरै काम गर्न बाँकी छन् । मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
सडक, भवन, पुल, सिँचाइ, जलविद्युत्, यातायात, वातावरणलगायत क्षेत्रको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । राज्यले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, जलविद्युत् र पुल निर्माणको काम पहिलो प्राथमिकतामा छ । २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम धेरै गर्नुपर्ने छ ।
याे पनि पढ्नुहोस्ः डेभलपमेन्ट स्टडिज्: समृद्धि र दिगो विकासको आधार
अहिलेको अवस्थामा भौतिक संरचनाको निर्माणपश्चात् व्यवस्थापन पक्ष पनि चुनौतीपूर्ण छ । निर्माण गर्ने तर त्यसको रेखदेख र संरक्षणमा चासो दिएको पाइँदैन ।
अन्य मुलुकमा निर्माणपछि व्यवस्थापनको काममा पनि इन्जिनियरलाई खटाइएको हुन्छ त्यसैले भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा आउने समस्या समाधानका लागि नेपालमा पनि इन्जिनियरलाई खटाउनुपर्ने हुन्छ । ती क्षेत्रका लागि पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ ।
त्यस्तै, देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय प्रदेश र केन्द्रका सरकारी कार्यालयमा पनि इन्जिनियरको माग छ । यी सबै काम गर्न दक्ष इन्जिनियरको आवश्यक भएकाले सिभिल इन्जिनियरिङलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २५, २०७६, ००:३८:००